Ogaden News Agency (ONA) – Xerada Dhagaxley oo lagu qabtay Shir shaadooyin lagu gudoonsiiyay ardaydii mutaysatay
Xerada Dhagaxley oo lagu qabtay Shir shaadooyin lagu gudoonsiiyay ardaydii mutaysatay
Maalin nimadii jamca ha oo ay taariikhdu kubeegnayd 01/11/2013 waxaa xerada Dhagaxlay ee deegaanka Dhadhaab lagu qabtay shir aad ubalaadhan oo ay siwada jir ah usoo wada qabanqaabiyeen maamulka faraca midnimo iyo maamulka OYSU dhagaxlay.
Shirkan oo ahaa shirkii caadiga ahaa ee uu faracu isugu imaan jiray bishiiba mar ayaa shalay mudnaan gooni ah lahaa waxaana kasoo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada. Shirka oo qaybtiisa hore ay hogaaminayeen gudiga faraca ayaa sidii caadiga ahaydba waxaa lagu furay aayadaha qur’aanka kariimka ah iyo wacdi diini ah oo uu soo jeediyay mid kamid ah culimada faraca waxaana laguda galay ajandayaashii shirka oo isugu jiray warbixin dal iyo dibad ah, abaabul, abshaxmarin iyo qodob muhiim ahaa oo ay goobta kasoo jeediyeen gudiga OGADEN REFUGEE COMMUNITY COMMITTEE ORCC. Dhinaca kale gudiga anshax marinta faraca midnimo ayaa shahaado sharaf gudoonsiiyay 5 xubnood oo kamid ah xubnaha faraca midnimo oo ay gudigu sheegeen in ay mutaysteen kadib markay dadaaleen waxayna goobta ka yeedhiyeen magacyadooda iyagoo gudoonsiiyay shahaado sharafta laga bixiyo xafiisyada bariga Africa.
Intaa kadib waxaa hogaankii shirka lagu wareejiyay gudiga OYSU dhagaxlay oo mudooyinkii udanbeeyay xubnaha siinayay siminaar aad muhiim u ah oo ay ka faa’iidaysteen xubno aad ubadan oo kudhaqan xerada. Koorsa halgameedkan oo lagu magacaabo ALIFLE ayaa lagu bartaa guud ahaa halkanka mudada boqolaalka sana ah kasocda wadanka ogadenia iyo sooyaalkiisa taariikheed oo adoonayo in ay ogaadeen jiilasha sookoraya waxaa sidoo kale lagu bartaa barnaamijka siyaasiga ah ee jabhada iyo xeerasha kaladuwan ee jabhada waxaa sidoo kale lagu bartaa doodaha iyo soobandhigida fikirada ay xubnuhu qabaan.
Sikastaba ha’ahaatee waxaa lagu soo dhaweeyay macalimiintii koorsada dhigaysay oo kala ahaa halgame Cabdi naasir iyo halgame Cabdi raxmaan baclay waxayna sharaxaad kabixiyeen koorsada iyo tirada ardayda ka faa’iidaysatay iyo dhibca ha ay kala heleen.
Guntii iyo gabo gabadii waxaa goobta lagu bixiyay shahaadooyinkii ardaydii kaqalin jabisay koorsada ALIFLE waxaana bixiyay xoghayaha OYSU dhagaxlay mudane bashiir maxamad isagoo si quruxmadan ugu yeedhayay xubnaha kuna kuna wareejinayay shahaada ay mutaysteen
Iskusoo wada duub oo jawiga ayaa ahaa mid farxadeed iyo goobta ay dadbadan kuqaateen shahaadooyin kuwo ku guulaystay itaxaamkii koorsada iyo kuwo shahaado sharaf lagudoonsiiyayba. Wuxuuna shirku kusoo dhamaaday guul iyo wajiyo farxadeed oo kamuuqday dadwaynihii madasha fadhiyay.